Khilaaf ka taagan halka lagu qaban doono mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha Baarlamaanka – Madal Furan
Hoy > Warka > Khilaaf ka taagan halka lagu qaban doono mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha Baarlamaanka
Khilaaf ka taagan halka lagu qaban doono mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha Baarlamaanka
Editor March 22, 2018 Warka 0
Madal Furan – Magaalada Muqdisho waxaa ka socda xodxodasho iyo kala jiidjiidasho la kala jiidjiidanayo xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya, ayadoo ay cirka isku sii shareereyso xiisadda ku saabsan mooshinka codka kalsoonida la doonayo in loogu qaado guddoomiyaha Baarlamaanka.
Xildhibaannada ka hor jeeda mooshinkaas waxay kalsooni darro ka muujiyeen xarunta Baarlamaanka oo ciidamo ka duwan kuwii hore ay amniga la wareegeen.
Xildhibaan Maxamed Isaaq Cismaan (Fanax) oo xildhibaannadaas ka tirsan wuxuu ku doodayaa in ciidankaas ay yihiin kuwo ay xukuumaddu soo dirsatay, kuwaasoo “haysta xarunta Baarlamaanka”, halka ciidankii hore ay ahaayeen “kuwo gunnadoodu ay ku jirtay miisaaniyadda Baarlamaanka”.
Wuxuu qabaa in codka mooshinka lagu qaado hoolkii ay ka dhacday doorshadii madaxweynaha bishii Febraayo 2017, ee gudaha xerada Afisiyoone.
Wuxuu kaloo intaa ku daray in loo baahan yahay in codayntu noqoto mid qarsoodi ah.
Dhanka kale, xildhibaannada qaba in xarunta baarlamaanka lagu qabto cod u qaadidda mooshinka ayaa ku doodaya in aysan jirin sabab loo aado goob kale oo aan ahayn xarunta Baarlamaanka.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dhalxa oo BBC la hadlay wuxuu meesha ka saaray inaysan jirin ciidan u gaar ah amniga Baarlamaanka iyo kuwo qabsaday toona.
“Sidee baynu ciidankii dalka qaarna u dugsanaynaa, qaarna uga dareen qabaynaa” ayuu yiri.
Dooddan ayaa ku soo aadaysa ayadoo guddoomiyaha Baarlamaanka uu AMISOM ka codsaday in codaynta mooshinka lagu qabto gudaha xerada Afisiyoone, bacdamaa uusan kalsooni ku qabin dhismaha xarunta Baarlamaanka.
Magaaladda Balcad oo Laba goor ay kala qabsadeen Al-shabaab iyo ciidamadda dowladda
Meydadka gabdho Soomaaliyeed oo laga helay haro ku taal magaaladda Minnesota ee dalka Mareykanka
DAAWO:-Shaqaalihii hawadda Soomaaliya maamulayey oo Nayroobi ka soo gaaray